चीन र भारतको छद्मयुद्ध :: अन्नपुर्ण पोष्ट | EBHAGRA | Latest Online News and Blogs from Nepal
Home / Opinion / चीन र भारतको छद्मयुद्ध :: अन्नपुर्ण पोष्ट
चीन र भारतको छद्मयुद्ध :: अन्नपुर्ण पोष्ट
Narayan Kafle May 9, 2016	Opinion Leaveacomment 263 Views
२७ बैशाख, २०७३ अन्नपुर्ण पोष्ट/युवराज गौतम
नेपाल साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनेको देखिन्छ। काठमाडौँ काबुल बन्दैछ। नेपाली जनता’भोटिङ मेसिन’ मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि भइरहेको छ। सार्वभौम अधिकार जनतामै छ भनिन्छ, तर सर्वाधिकार विदेशीमै रहेछ। त्यसैले राष्ट्र रसातलमा जाँदै छ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपाललाई बुहराष्ट्रिय राज्य भनिदिए। नेपाली बुद्धिजीवी र कतिपय लेखकले’हो-हो’ भन्दै त्यसको समर्थन गरे। धेरै राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाउने साम्राज्यभित्र हुन्छ- बहुराष्ट्रिय राज्य।
केही दिनअघि यस्तै एकजना फिरंगीवादीले’देश (नेपाल) रहोस्-नरहोस् तर मधेस रहनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। अमेरिकामा पढेर आएका अर्का अधिकारवादी (? ) नेपाल आमा रन्डी भन्दै चिच्याए। अदालतले निर्दोष छन् भनिदियो उनलाई।
बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानद्वारा हालै काठमाडौँमा आयोजित तीनदिने विचार गोष्ठीमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको अन्तरसम्बन्धबारे विशद् छलफल भयो।’जय नेपाल’ भन्दै विदेशीका एजेन्डामा हिँड्ने (बीपीको शब्दमा भुइँफुट्टा वर्ग) कांग्रेसीहरू जय नेपाल होइन’गए नेपाल’ पथमा अघि बढेकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरे।
तराईबाट जनसंख्याका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व बढाउँदै जाँदा फिजीमा झैँ’खेत तिम्रो धान मेरो’ हुने निश्चित छ। स्वतन्त्र राष्ट्र फिजीमा ८० प्रतिशत अचल सम्पत्ति भारतीयहरूको कब्जामा छ। संसारका १० राष्ट्रबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं डलरबराबरको सम्पत्ति भित्र्याउँछन् भारतीयहरू। त्यसमा नेपाल पनि पर्छ।
त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी भन्छन्,’नेपालले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ।’ चीनको आशंका छ, त्यसो हुन नसकेमा नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौता र समझदारीहरू अनाथ बन्नेछन्। समझदारी मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताले संविधानलाई नै टुहुरो बनाइदिने खतरा देखिएको छ।
संघीयताका पक्षमा तराईमा दुईपटक भएको रक्तपातमा झन्डै एक सयजनाले प्राणोत्सर्ग गरिसकेका छन्। त्यो त सिनेमाको पूर्वांश (ट्रेलर) मात्रै हो। हिन्दीमा भन्छन् नि,’अभि पिक्चर बाँकी है।’
चीनले चाहेजस्तो गर्दा भारत, युरोप र अमेरिका रिसाउने, भारत र पश्चिमको आदेश मान्दा चीन रिसाउने। नायक भुवन केसीले रेडियो नेपालमा ३५÷३६ वर्षअघि एउटा गीत गाएका थिए,’जेठी छोडुँ घरवार जान्छ, कान्छी छोडुँ माया लाग्छ, परेँ म दोधारैमा।’ नेपालका विदेशवादी नेताहरूको मनोविज्ञान आज त्यस्तै छ।
विदेशीको दानापानी खाएपछि राष्ट्रवादी बन्न सकिँदैन। मध्यरातमा संविधानको विरोध गर्दै सुतेका केही ‘राष्ट्रवादी’ नेताले बिहानै उठेर संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्वीकार गरे। त्यसवापत पद पनि पाए। अरू केके लिए, त्यो समयले बताउला। राष्ट्रघाती संविधान भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा त्यस्तो संविधानलाई’उत्कृष्ट’ भने अवसरवादीहरूले। मतदाता छक्क परे।
बागलुङका पुराना राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी बलराम हमाल ठकुरी भन्छन्,’०६२÷६३ सालमा विदेशीले मञ्चन गराएको नाटक पनि राजा वीरेन्द्रको हत्या र मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछिको अर्को कडी थियो। त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्र एक्लै हारे। राष्ट्रनायक मात्रै हार्ने कस्तो युद्ध थियो त्यो? राजदरबारले हुर्काएका वा विश्वास र भरोसा गरेका प्रायः सबै गणतन्त्रमा मिल्न गए। राजालाई शक्तिहीन बनाइएपछि नेपालमा कुन संस्था बलियो भयो त? कार्यपालिका?
न्यायपालिका? व्यवस्थापिका? वा नयाँ राजनीतिक प्रणाली ?राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउँदा हामी किन खुसी हुने? किन विदेशीका एजेन्डा समर्थन गर्ने ? सोह्र-सत्र वर्ष गाविस, नगरपालिका र जिविसको निर्वाचन गराइएन। यसरी लोकसम्मतिविना सञ्चालन गर्ने पद्धति कसरी लोकतन्त्र हुन्छ? ‘
उनले उठाएका यस्ता प्रश्नको उत्तर दलहरूसँग छैन। दलको काम छल गर्नु मात्रै हो त? विदेशीका दास बनेर बस्नेहरूले व्यक्तिगत सुखसुविधा मात्र खोजेका हुन् भने उनीहरूका विदेशी मालिकहरूले आआफ्ना राष्ट्रमा एकएक वटा’अमलेखगन्ज’ बनाएर राखे हुन्छ। त्यसपछि नेपाली आत्माले चलाउँछन् देश। विदेशीको छद्मयुद्ध स्वतः बन्द हुन्छ। नेपाल फिजी हुन पाउँदैन।
पृथ्वीनारायण शाहका शब्दमा’जाई कटक नगर्नू झिकि कटक गर्नू’ भनेको यही हो। किनभने नेपालभित्र नेपालीबाहेक अरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था अब समाप्त हुँदै गएको छ। जो नेपाली भएर पनि नेपालकै विरुद्ध काम गर्छन्, ती सरासर राष्ट्रघाती हुन्। राष्ट्र टुक्र्याउन खोज्नेलाई कसरी नेपाली भन्ने?कसरी विश्वास गर्ने?
टाठाबाठाहरू सबैजसो दलका कार्यकर्ता छन्। तल्लो तहका दुःखी जनता असंगठित छन्। यही कारणले लोकतन्त्रका नाममा बहुमतको नाताशाही चलेको छ र राष्ट्र बन्दैछ, कुरुक्षेत्र।
15821 Total Views9Views Today
Previous Neighborhood watch :: My Republica
Next काठमाडौंमा यूएईको दूतावास :: कान्तिपुर